ဝသုနျ – My Blog
သူ့နာမညျက ဝသုနျပါ။ ဝသုနျဆိုတာ ကြှနျတျောရဲ့ ညီမဝမျးကှဲပါ။ ၂၀မျးကှဲလို့ပွောရမယျနဲ့တူတယျ။ ကြှနျတေျာ့အမရေဲ့ ဝမျးကှဲအကိုရဲ့သမီးပါ။ အဖွဈအပကျြကို လိုရငျပဲပွောပါတော့မယျ။အဲဒိနကေ့ သင်ျကွနျ အကနြပေ့ါ။ ဝသုနျတို့ အိမျက လမျးထဲမှာပါ။ ကြှနျတျောတို့အိမျက လမျးမပျေါပါ။ ဝသုနျကို သူ့အဖနေဲ့ အမကေ အပွငျပေးမထှကျပါဘူး။ သူ ရပေကျခငျြရငျ ကြှနျတျောတို့အိမျကို လာပွီးရပေကျရပါတယျ။ သူ့အဖနေဲ့အမကေ မနကျဖကျ ကားနဲ့လာပို့ပါတယျ။ နေ့ လညျ ပွနျကွိုတယျ။ ညနပွေနျပို့တယျ ညဖကျ ပွနျကွိုပါတယျ။ အဲဒိအခြိနျတုနျးက ဝသုနျက ၇တနျးဖွအေပွီး ၈တနျးတကျမှာပါ။ ကြှနျတျောက တဈဦး တညျးသား၊ ၁၀တနျးဖွထေားပါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ သင်ျကွနျဆို အပွငျထှကျလညျလမေ့ရှိပဲ အိမျမှာပဲ စာအုပျတှေ အခှတှေေ ထိုငျကွညျ့ရတာကို သဘောကသြူပါ။
အိမျကလူတှကေတော့ ပုံမှနျသင်ျကွနျဆို တရားစခနျးဝငျတာမို့ အိမျမှာ ကြှနျတျော တဈယောကျတညျးရှိလရှေိ့ပါတယျ။ အမလေုပျတဲ့သူက တပတျစာအကုနျ ခကျြပေးခဲ့ပါတယျ။ ခုနက သင်ျကွနျအကနြေ့ ကိစ်စကို ပွနျဆကျပါမယျ။ အဲဒိနကေ့ ထုံးစံအတိုငျး ဝသုနျအိမျကို လာပွီးရပေကျပါတယျ။ တီရှပျအဖွူ ကာတှနျး ရုပျလေးတှနေဲ့၊ ဘောငျးဘီကတော့ အတို ပှပှ အဝါရောငျတောကျတောကျလေးပါ။ အဲဒိနကေ့ အကနြမေို့လို့ ၈နာရီခှဲလောကျကတညျးက အိမျရှမှေ့ာ ဝသုနျ တို့ သောငျးကနျြးနပေါပွီ။ ဘေးအိမျက ကလေးတှနေဲ့ တရုနျးတရုနျးနဲ့ လမျးပျေါဖွတျသမြှလူတှကေို ရပေကျနပေါတယျ။ ကြှနျတျောကတော့ ရှဥေဒေါငျးရဲ့ တသကျတာမှတျတမျးကို ဖတျလိုကျ မကျြစိညောငျးရငျ ကလေးတှရေပေကျတာကို ကွညျ့လိုကျနဲ့ပေါ့။ အဲဒိအခြိနျတငျ ဖုနျးလာပါတယျ။
ဝသုနျရဲ့ အမပေါ။ အကွောငျးကတော့ သူတို့ဒီနေ့ မိတျဆှတှေလောချေါလို့ ဥပုဒျစောငျ့သှားကွမယျ။ နလေ့ညျ ဝသုနျကို အိမျမှာချေါထားဖို့နဲ့ ညနေ သူတို့ ပွနျလာမှ လာကွိုမယျဆိုတာပါ။ ဖုနျးဆကျပွီးပွီးခငျြး ဝသုနျကို သှားပွောပါတယျ။ သူကတော့ပြျောသှားပုံပါပဲ။ကြှနျတေျာ့ကိုတောငျ ရနေဲ့ လှမျးပကျပွီး စ လိုကျသေးတယျ။ နောကျတော့ နလေ့ညျ ၁၁ခှဲကြျောလာတော့ ကလေးအုပျစုကွီး တစတစနဲ့လာပါတယျ။ နောကျဆုံး ဝသုနျနဲ့ ဘေးအိမျက ကလေးလေး ၂ယောကျပဲကနျြပါတော့တယျ။ ခဏနရေငျ ဝသုနျကို လှမျးချေါမယျလို့ စိတျကူးပွီး ကြှနျတျောဝတ်တုကို ဆကျဖကျနလေိုကျပါတယျ။
ခဏနတေော့ အိမျရှကေ့ စီကနဲ အသံကွားလိုကျပါတယျ။ ကလေးတှရေဲ့ အသံရယျ တခွား ကောငျလေးတှရေဲ့ အသံကို ကွားလိုကျပါတယျ။ ကြှနျတျော အိမျရှရေ့ောကျတော့ ရပေကျခံကားတဈစီးမောငျးထှကျသှားတာပဲမွငျလိုကျပါတယျ။ ဝသုနျတို့ကိုကွညျ့လိုကျတော့ ၃ယောကျစလုံး အိုးမဲတှနေဲ့ ပတေူးနပေါတယျ။ ဝသုနျက ငိုမဲ့မဲ့နဲ့ ကိုကွီးဆိုပွီး အိမျထဲပွနျပွေးလာပါတယျ။ ကလေး၂ယောကျကတော့ အသံဗွဲနဲ့ အျောငိုပွီး အိမျကို ပွနျကုနျကွပါတယျ။ ဝသုနျကော ကလေး ၂ယောကျစလုံး ပတေူးနတောပဲ။ ရပေကျခံကားက သူတို့ကို ဝိုငျးခြုပျပွီး တော့ မကျြနှာကော ခွတှေေ လကျတှကေိုပါ သုတျလိုကျကွတာပါ။ ကြှနျတျောကတော့ ဝသုနျကို ကွညျ့ပွီးခှကျထိုးခှကျလှနျကို ရီမိတာပါပဲ။
ဝသုနျကတော့ ဆူဆူအောငျ့အောငျ့နဲ့ “ကိုကွီ ဘာရီတာလဲ၊ ကိုယျ့ညီမကိုယျ ကာကှယျမယျတော့မရှိဘူး” ဆိုပွီးတော့ပေါ့။ “ကောငျးတယျ၊ စောစောမှမတတျကွတာကို” ဆိုတော့ ဝသုနျက ကြှနျတျောကို့ နှာခေါငျးရှုံ့ပွတယျ။ မကျြနှာကလေးစူစူလေးနဲ့ နှာခေါငျးရှုံ့ပွတာမြိုးက အငျမတနျခဈြဖို့ကောငျးတာကလားဗြာ။ “ညီမလေးက သူတို့သုတျတာကို ထှကျမပွေးဘူးလား” ဆိုတော့ “အကိုကွီးရယျ.. သူတို့က ညီမလေးတို့ကို ဝိုငျးအခြုပျပွီး သုတျလိုကျတာ” တဲ့။ အဲ ဒါနဲ့ ကြှနျတျောကပဲ “ကဲကဲ… နလေ့ညျလဲရောကျနပွေီ ရသှေားခြိုးတော့… ညနမှေပဲ ပွနျထှကျတော့” အဲတော့လဲ ဟုတျ ဆိုပွီး ရခြေိုးခနျးထဲ တနျးဝငျသှား တော့တာပဲ။ ပွဿနာက အခုမှစတာ။ သူ့အဖနေဲ့ အမကေ သူတို့ကိစ်စရှိတာနဲ့ ပဈသှားကွတာ။
ဟိုကောငျမလေးအတှကျ အဝတျအပိုလေးတောငျ ထားခဲ့ပေးတာမဟုတျဘူး။ ကိုယျကလညျး အိမျမှာ တဈဦးတညျးသား။ မိနျးခလေးအဝတျကရှိတာမဟုတျ ဘူး။ အဲဒါနဲ့ တဘတျလေး ပုခုံးပျေါတငျ၊ ကြှနျတေျာ့ ဘောလုံးကနျဘောငျးဘီရယျ တီရှပျတဈထညျရယျ ယူပွီးတော့ ရခြေိုးခနျးဖကျလိုကျလာလိုကျပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ ဘောလုံးကနျဘောငျးဘီရယျ တီရှပျတဈထညျရယျ ယူပွီးတော့ ရခြေိုးခနျးဖကျလိုကျလာလိုကျပါတယျ။ ကောငျမလေးကတော့ တံခါးပိတျလို့ ရခြေိုးနပေါပွီ။ ကြှနျတျောက လှမျးအျောလိုကျပါတယျ “ညီမလေး ရခြေိုးပွီးရငျ ဝတျဖို့အဝတျတှအေပွငျမှာနျော.. ကိုကွီးစောငျ့နပေေးမယျ ညီမလေး ရခြေိုးပွီးမှ တမငျးတူတူးစားကွတာပေါ့” “ဟုတျကိုကွီးရေ ဒီမှာတော့ ညီမလေးကို အိုးမဲသုတျသှားတာပပှေနတောပဲ မကျြနှာတငျမကဘူး ကြောတှပေါ သုတျသှားတာ” “ဟဲ့.. အဲတော့ ကြောမှာပနေတော ညီမလေး ဘယျလိုဖကျြမလဲ အကိုကွီးဖကျြပေးမယျ… တံခါးဖှငျ့..” ကြှနျတျောက ပွောပွီး တံခါးကို ၃ခကျြလောကျပုတျလိုကျပါတယျ။
“အာ.. အကိုကွီးကလညျး.. ရတယျ ညီမလေးဖာသာဖကျြမှာပေါ့” “ဘယျလိုလုပျဖကျြလို့ရမှာလဲ.. ကိုကွီးဖကျြပေးပါ့မယျညီမလေးရယျ… မရှကျပါနဲ့… ဟို တုနျးကလဲ ညီမလေးကို ကိုကွီးရခြေိုးပေးဖူးသေးတာပဲကို…” “အာ.. ကိုကွီးရတယျ” “ရမနနေဲ့.. ကိုကွီးဖှငျ့ဆိုဖှငျ့လေ.. ဘာလြှာရှညျနတောလဲ..” ကြှနျ တေျာ့လသေံလေး နဲနဲမာလိုကျတော့မှ “ငါကိုက လြှာသှားရှညျတာ… အားအားယားယား” ဆိုတဲ့ ပါးစပျက ပှစိပှစိသံတိုးတိုးနဲ့ တံခါးခကျြဖွုတျသံကွားရပါ တယျ။ တံခါးကိုဖှငျ့မပေးပါဘူး။ ကြှနျတျောက တံခါးကို ဆှဲဖှငျ့ရတာပါ။ တံခါးကို ဆှဲဖှငျ့လိုကျတော့မှ လကျတဈဖကျကို ရငျအုံပျေါကနျ့လနျ့တငျပွီး နောကျ လကျတဈဖကျနဲ့ ညီမလေးကို ကှယျထားတဲ့ ဝသုနျကို တှရေ့တာပါ။ဝသုနျကို မွငျမွငျခငျြး ကြှနျတျောမကျြလုံးထဲကို ပွာခနဲကို ဖွဈသှားပါတယျ။
ကြှနျတျောမထငျဘူး။ ကြှနျတေျာ့ညီမလေး ဝသုနျဟာ အဲလောကျလှ အဲလောကျခဈြဖို့ကောငျးလိမျ့မယျလို့ကို မထငျတာပါ။ အသားလေးက ဖွူဝငျးနပေါ တယျ။ ရငျသားလေးတှကေို လကျနဲ့ကှယျထားပမေဲ့ စူစူလေးထှကျနတောကို သတိထားလိုကျမိပါတယျ။ တငျပါးလုံးလုံးလေးတှကေ ရစေိုထားလို့ ပွောငျလကျနပေါတယျ။ အိုးမဲတှကေလညျး ကိုယျအနှံပါ။ ဟိုသူတောငျးစားတှေ ဘယျလိုမြားသုတျလိုကျလဲမသိဘူး။ မကျြနှာတငျမကဘူး။ ခွတှေေ လကျ တှအေပွငျ ပေါငျနဲ့ တငျပါးပျေါမှာမဲတူးနပေါတယျ။ သူကတော့ မကျြနှာစူပုတျပုတျနဲ့ ပှစိပှစိပွောနတေုနျးပါပဲ။ “ကိုကွီး.. ဘာကွညျ့နတောလဲ.. ရှကျပါတယျ ဆိုမှ” သူက အျောမှ လနျ့ပွီးသတိဝငျလာပါတယျ။ “အေးပါဟ… ညီမလေးကလညျး တကတညျး ကိုယျ့ညီမကိုယျလှမှနျး အခုမှသိသှားလို့ပါ” “ကိုကွီးနျော… ဒျေါလေးတို့နဲ့ တိုငျလိုကျမှာ…” “အဲ.. တိုငျတော့မတိုငျပါနဲ့ကှယျ…. ဒါနဲ့ ညီမလေးက မကျြနှာတငျမကပဲ တငျပါးတှမှောပါ အိုးမဲတှပေနေရေတာလဲ” “ဟုတျ တယျ… ဟိုအကောငျတှေ ညီမလေးကို အတငျးခြုပျပွီးသုတျသှားတာ… ဘောငျးဘီထဲကိုပါ လကျနှိုကျသှားတာ.” “ကဲကဲထားပါတော့ ကိုကွီး ဆေးပေးပါ့ မယျ” ခှေးသူတောငျးစားတှကေ အိုးမဲဆိုပွီး အမဲဆီတှသေုတျသှားတာ။
ဘယျဖကျြလို့လှယျပါ့မလဲ။ ကြှနျတျော အရငျဆုံးသူ့လကျက အိုးမဲတှကေို စဖကျြပေးပါတယျ။ သူ့လကျတဈဖကျကို ပေးလိုကျရလို့ ရငျသားလေးတှအေကာ အကှယျမဲ့ပွီး ဟငျးလငျးလေးဖွဈသှားပါတယျ။ ရငျသားလေးတှကေ အခုမှ စူစူလေးတှေ ဖွဈစလေးတှပေါ။ နို့သီးခေါငျးလေးတှတေောငျမပျေါသေးပါဘူး။ လကျမှာပနေတေဲ့အမဲဆီတှကေို တျောတျောလေး ဆေးပေးလိုကျရပါတယျ။ ဆပျပွာအထပျထပျတိုကျပွီးမှပွောငျတာပါ။ “ဟိုဖကျလှညျ့…” သူ့ကို ကြောပေးခိုငျးပွီးတော့ ကြောမှာ အစငျးလိုကျကွီး ဖကျြရပါသေးတယျ။ ပွီးတော့မှ တငျပါးမှာ လကျရာကွီး။ ကွညျ့ရတာ ဘောငျးဘီအောကျခွကေနပွေီ အောကျခံဘောငျးဘီထဲအထိနှိုကျပွီး ဖငျကို ကိုငျသှားတာပါ။
” ခှေးမသား မောငျမငျးကွီးသားမြား ငါ့ညီမ ဖငျနုနုလေးကို ကိုငျသှားကွတယျ။ ကားအစီးလိုကျ မွောငျးထဲထိုးကပြါစဗြော” ကြှနျတျော စိတျထဲကနပွေီး ရရှေတျလိုကျတာပါ။ အဲဒါကို ဝသုနျက “ကိုကွီး.. ညီမလေးဖငျကွညျ့ပွီး ဘာတှေ ပှစိပှစိနဲ့ ရှတျနတောလဲ…” “အာ… မဟုတျရပါဘူးညီမလေးရယျ…” ကြှနျတျောသူ့ဖငျလုံးလုံးလေးကို လကျနဲ့ကိုငျလိုကျပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့လကျထဲမှာ နူးညံ့တဲ့ အထိအတှလေ့ေးနဲ့ အိကနဲပါလာပါတယျ။ ပွီးတော့မှ တငျပါး လေးကို လကျကလေးနဲ့ အသာအယာလေး ပှတျပေးနမေိပါတယျ။”အကိုကွီး… အကိုကွီး အိုးမဲဖကျြနတောလား… ညီမလေးဖငျကို ပှတျနတောလား…” “အငျးပါ အငျးပါ” ကြှနျတျော ပွနျဖွပွေီးတော့ သတိဝငျလာတာနဲ့ အခုမှ အိုးမဲကို စဖကျြဖွဈပါတယျ။
တငျပါးလေးကို ညှဈညှဈပွီးကိုငျပါတယျ။ လကျတဈဖကျနဲ့ နယျပါတယျ။ ဖငျကွားလေးထဲကို လကျကလေးနဲ့ အမွှောငျးလိုကျလေးပှတျဆှဲတော့ ညီမလေး ကော့သှားပါတယျ။ “အ.. အ.. ကိုကွီးရေ.. ဘာတှလေုပျနတောလဲ..” အမဲဆီတှေ ပွောငျလောကျပွီမို့ ကြှနျတျော ရလေောငျးခပြေးလိုကျပါတယျ။ ရစေ လေးတှနေဲ့ဝငျးနတေဲ့ ဖငျလုံးလုံးလေးကိုမွငျတော့ ကြှနျတျော စိတျမထိနျးနိုငျတော့ပါဘူး။ တခါတညျး ကုနျးနမျးလိုကျမိပါတယျ။ ‘ကိုကွီးရေ.. ညီမလေးဖငျ ကို ဘာလို့နမျးနတောလဲ…’ ညီမလေးက အျောပါတယျ။ “အျော… အမဲဆီတှကေ အနံ့ပါကနျြတတျတယျလေ.. အနံ့ပါ ပွောငျမပွောငျ နမျးကွညျ့ရတာပေါ့” ကြှနျတျော နှခေါငျးက မခှာပဲနဲ့ပွောလိုကျပါတယျ။ နှခေါငျးလေးနဲ့ ဖငျကွားလေးထဲအထိုတိုးပွီး ရှူလိုကျပါတယျ။ ဆပျပွာနံ့သငျးသငျးလေးနဲ့ပါ။
နှုတျခမျးလေးတှနေဲ့လညျး ပှတျတိုကျသှားလိုကျပါတယျ။ “ကိုကွိးရေ.. တျောပွီနျော… ညီမလေး မနတေတျတော့ဘူး…” သူပွောမှပဲ မကျြနှာကို ခှာလိုကျပါ တယျ။ “ကဲ.. အကုနျပွောငျပွီနဲ့တူတာပဲ…. ” ညီမလေးက အခုထိ သူ့ပိပိလေးကို လကျနဲ့ အုပျထားတုနျးပါ။ အခုထိ သူ့ ပိပိလေးကို တစှနျးတဈစတောငျမမွငျ ရသေးလို့ အကွံထုတျလိုကျပါတယျ။ “ညီမလေး… အောကျကလကျကို ဖယျလိုကျလေ.. ဖုံးမထားနဲ့… အဲမှာ အိုးမဲတှပေနေသေေးလားမသိဘူး” “အာ.. အကိုကွီးကလဲ မပပေါဘူး…. ” “လကျဖယျလိုကျပါညီမလေးရယျ” “ဖယျပါဘူး.. ရှကျစရာကွီး” “ဘာလို့ရှကျရတာလဲ.. မောငျနှမခငျြးခငျြးပဲဟာ.. ရှကျစရာ မဟုတျပါဘူး” “ရှကျစရာမဟုတျရငျ ကိုကွီးခြှတျနပေါ့လား… သူကတြော့ မခြှတျပဲနဲ့….” “အျော.. ညီမလေးကို ကိုကွီးမခြှတျပဲနလေို့လား”
“ဟုတျတယျ… ညီမလေးကတော့ ဖငျပွောငျကွီးနဲ့.. သူကတြော့ အကုနျဝတျထားတယျ… ကိုကွီး အကုနျခြှတျရငျ ညီမလေး လကျဖယျမယျ….” “ကဲကဲ… ငါ့ ညီမလေး စိတျခမျြးသာစဖေို့ ကိုကွီး ခြှတျပေးရမှာပေါ့…” ကြှနျတျော ဝတျထားတဲ့ တီရှပျကို အရငျခြှတျလိုကျပါတယျ။ ဘောလုံးကနျလရှေိ့တဲ့သူမို့လို့လား တော့မသိဘူး ကြှနျတေျာ့မှာ သငျ့တငျ့တဲ့ ကွှကျသားတှတေော့ရှိပါတယျ။ ညီမလေးကို လှမျးကွညျ့လိုကျတော့ ကြှနျတေျာ့ကို မမှိတျမသုံ စိုကျကွညျ့နပေါ တယျ။ ကြှနျတျောလဲ သူ့ရှမှေ့ာ ဘောငျးဘီကို ခြှတျခလြိုကျပါတယျ။ ညီတျောမောငျက ဖွောငျးကနဲကို ကနျတကျလာပါတယျ။
“ကိုကွီးဟာက မာမာကွီးလား… ဘာလို့မာနတောလဲ” “အငျး.. ညီမလေးကို အခုလိုမွငျရတော့ အကိုကွီး မနနေိုငျတော့ဘူးလေ… ညီမလေး ကိုငျခငျြရငျ ကိုငျကွညျ့လေ…..” ညီမလေး ကြှနျတေျာ့ညီလေးကို မရဲတရဲနဲ့လာကိုငျပါတယျ။ အခုတော့ သူ့ပိပိလေးကနလေကျကို ခှါလိုကျတဲ့အတှကျ သူ့ပိပိလေးကို စမွငျရပါတယျ။ အမှေးမပေါကျသေးပါဘူး။ မို့မို့လေး နဲ့ပွောငျရှငျးနပေါတယျ။ ထငျတဲ့အတိုငျးပဲ သူ့ဆီးခုံမှာလညျး အိုးမဲတှပေနေပေါတယျ။ “ကဲ.. ကဲ အဲဒိ အိုးမဲတှပေါ အကိုကွိးဆေးပေးမယျနျော…” ညီမလေး ဘာမှပွနျမပွောတော့ပဲ ကြှနျတေျာ့ဖကျကို အသာတကွညျလေးလှညျ့ပေးပါတယျ။ ကြှနျတျော ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျခလြိုကျတော့ သူ့ပိပိလေးနဲ့ ကြှနျတေျာ့မကျြနှာ တတနျးထဲဖွဈသှားပါတယျ။ လကျထဲကို ဆပျပွာနဲနဲယူပွီး သူ့ပိပိဘေးကို စပှတျလိုကျပါ တယျ။
ညီမလေး နဲနဲတှနျ့သှားပါတယျ။ ကြှနျတျော သသေခြောခြာလေး သူ့ပိပိဘေးနားလေးကို ပှတျပေးလိုကျပါတယျ။ အခုမှလညျး သူ့ပိပိလေးကို အနီးကပျမွငျရ ပါတယျ။ ပိပိလေးက ခုံးထနပေါတယျ။ ကွှကျနားရှကျလေးတှကေအခုမှ ထှကျပွူစလေးပါ။ နှုတျခမျးသားလေးတှကေ ရဲတှတျနပေါတယျ။ ကြှနျတျော လကျခြျောသလိုနဲ့ သူ့ပိပိလေးကို ပှတျပေးလိုကျပါတယျ။ ညီမလေးဆီက အသံမကွားရတော့ပါဘူး။ သူ့အသကျရှူသံတှမွေနျနမှေနျးတော့သိပါတယျ။ သူ ရှကျသှားမှာစိုးလို့ မကျြနှာကို မကွညျ့တော့ပဲ အသာအယာလေးပှတျပေးနပေါတယျ။ ပွီးတော့မှ ပှတျတာကို ရပျပွီး ရလေေးလောငျးခပြေးလိုကျပါတယျ။ သူ့မကျြလုံးတှကေ အားမရသလို ရီဝဝေကွေညျ့နတောကို တှလေို့ကျပါတယျ။
“ညီမလေးရယျ.. ရခြေိုးတာ အရမျးကွာနပွေီ.. အအေးမိလိမျ့မယျ..” သူ့ကို ပါလာတဲ့ တဘတျနဲ့ ရသေုတျပေးလိုကျပွီး အခနျးထဲသှားဖို့ ပွောလိုကျတာပါ။ “အဝတျဝတျမနနေဲ့တော့ အခနျးထဲရောကျရငျ ရခွေောကျအောငျ သုတျရအုနျးမှာ..ဝသုနျတဈယောကျ ကိုယျတုံးလုံးနဲ့ အိပျခနျးထဲကို လှဈခနဲပွေးသှားပါ တယျ။ ကြှနျတျောကလညျး သူ့နောကျကနပွေီးတော့ တဘတျလေးကိုငျပွီးပွေးလိုကျလာတာပါ။ “ဟား…ဟာ… ကောငျမလေး ရှကျလဲမရှကျဘူး…. ဖငျ ပွောငျကွီးနဲ့ သှားနတေယျ…” ကြှနျတျောလှမျးစလိုကျတော့ ဝသုနျကလဲ အားကမြခံ… “ကိုကွီးလဲ ဘာထူးလို့လဲ… သူ့ဟာကွီး တရမျးရမျးနဲ့ မရှကျဘဲနဲ့ မြား….” အခနျးထဲရောကျတော့ – “ကဲ.. ကိုကွီးရသေုတျပေးမယျ… ငါ့ညီမလေးကို” ဝသုနျကြှနျတေျာ့ရှမှေ့ာ ညိမျညိမျလေးရပျနပေေးပါတယျ။
ကြှနျတျောက ရမေသုတျသေးပဲနဲ့ သူ့ကို ခွဆေုံးခေါငျးဆုံးသခြောကွညျ့ပွီးတော့- “အားပါး … ငါ့ညီမလေးက တျောတျောလှ.. တျောတျောခဈြစရာကောငျးပါ လား… နို့သီးခေါငျးလေးတှကေ နီရဲရဲလေးတှေ… ဆီးခုံလေးက ဖောငျးပွီး ဟိုနရောလေးက………” “ကိုကွီးရေ… တျောတော့.. ညီမလေးရှကျလာပွီ” စကားမဆုံးသေးခငျ အတငျးအျောပွီး တားပါတယျ။ မကျြနဲကလညျး ရဲပတောငျး ခတျနပေါတယျ။ “ညီမလေး… ဟိုဖကျလှညျ့ပေးပါလား.. ကိုကွီးကွညျ့ ခငျြလို့….” “ကိုကွီးနှာဘူး…” ပါးစပျကအျော၊ မကျြစောငျးထိုးရငျးနဲ့ ကြောလှညျ့ပေးပါတယျ။ တငျပါးလေးကားကား၊ ဖငျက လုံးလုံးကဈြကဈြလေး၊ ပေါငျတံ သှယျသှယျ နဲ့အရမျးလှတဲ့ကြှနျတေျာ့ညီမလေးလေ။ ကြှနျတျော ညီမလေးကို နောကျကနေ သိုငျးဖကျလိုကျပါတယျ။
ကြှနျတော့ မာမာကွီးက သူ့ဖငျကွားထဲကို တနျးတနျးကွီးကို ထောကျမိပါတယျ။ “ငါ့ညီမလေး… အိုးမဲတှေ စငျရဲ့လား.. အမဲဆီနံ့တှေ နံနသေေးလား… မှနျးစမျး.. အကိုကွီး နမျးကွညျ့မယျ…” သူ့ပါးလေးကို ရှတျခနဲနမျးလိုကျပါတယျ။ “အားပါး.. မှေးလိုကျတာ… ဒီပါးတော့ စငျသှားပွီ.. ကနျြတဲ့နရောတှေ စဈရ အုနျးမယျ” ဝသုနျရဲ့ ကြောဆီကို နမျးရငျးနဲ့ အောကျကို ဆငျးသှားလိုကျပါတယျ။ တငျပါးလေးကို နှုတျခမျးလေးနဲ့ ခလုတျတိုကျလိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့ သူ့ကို ရှကေို့လှညျ့လိုကျပါတယျ။ သူ့ပိပိလေးက ကြှနျတေျာ့ နှာခေါငျးလေးနဲ့ ကှကျတိလေးပါ။ ကြှနျတျောမနနေိုငျတော့ပါဘူး။ နှုတျခမျးနဲ့ နမျးရငျးနဲ့ လြာနဲ့ သူ့ပိ ပိလေးကို လြှကျလိုကျပါတယျ။
“အ.. ကိုကွီး… ဘာလို့ လြှာနဲ့ လကျြနတောလဲ” “အျော အနံ့တငျစငျလို့မရဘူးလေ အိုးမဲ အရသာတှကေနျြမကနျြစဈတာ” “ကိုကွီးလူလညျကွီး” “ညီမလေး ကုတငျပျေါတကျကှာ ကိုကွိးအရသာခံလို့မရဘူး…” ကြှနျတေျာ့ညီမလေး ကုတငျပျေါတကျပွီး ပကျလကျလေးလှနျပေးပါတယျ။ ကြှနျတျော သူ့ပေါငျ ကွားမှာ နရောယူပွီးတော့မှ သူ့ပိပိလေးကို လကျလေးနဲ့ အသာဟ —– အားပါး.. အထဲမှာ ရဲတှတျနပေါတယျ။ နှုတျခမျးသားလေးတှကေ ပနျးရောငျလေး။ ပိ ပိလေး အပျေါတဝိုကျမှာ တော့ ပွောငျရှငျးနပေါတယျ။ ကြှနျတျော လြှာဖြားလေးနဲ့သူ့ပိပိထဲက အဆံလေးကို တို့လိုကျပါတယျ။ ‘အ… ကိုကွီး.. ဘာလုပျတာ လဲ….’ အသံထှကျပွီးတာနဲ့ ညီမလေး ဆီက အသကျရှူသံပွငျးပွငျးတှပေဲ ကွားနရေပါတယျ။ ကြှနျတော့ကတော့ လြာနဲ့ အပွားလိုကျဆှဲလိုကျ။ အထဲမှာ ထိုး မှလေိုကျ၊ လကျနဲ့ ဖွဲပွီး လြှာနဲ့ ထိုးလိုကျနဲ့ တျောတျောကို အလုပျရှုပျနပေါတယျ။ သူ့ပိပိလေးကအရတှေကေလညျး ရှဲစိုနပေါပွီ။
‘ညီမလေး… ကိုကွီး ညီမလေး ဟာထဲကို သှငျးခငျြတယျကှာ…’ “ကိုကွီး.. မဖွဈလောကျဘူးတူတယျနျော… မောငျနှမခငျြးတှေ… ပွီးတော့ ညီမလေးဟာက သေးသေးလေး.. ကိုကွီး ဟာက အကွီးကွီး… ” “အျော.. ညီမလေးရယျဖွဈမှာပါ….” ကြှနျတျော သူ့ဆီက တုနျ့ပွနျမှုကို မစောငျ့တော့ပဲ သူ့နှုတျခမျးတှကေို တစေု့ပျလိုကျပါတယျ။ ညီမလေး မကျြတောငျ ကော့စငျးပွီး ညိမျးကသြှားပါတယျ။ လကျတဖကျက သူ့ပိပိလေးကို ပှတျရငျးနဲ့ ကြှနျတေျာ့ဟာကို သူ့ပိပိလေး နဲ့ တပွေီ့း ပှတျဆှဲနလေိုကျပါတယျ။ ပွီးတော့မှ အလဈအငိုကျဖမျးပွီး ဖိထညျ့လိုကျပါတယျ။ “အာ သပေါပွီ ကိုကွီးရယျ…” “အျော… ဖွညျးဖွညျးပါညီမလေး ရယျ…” သူနှုတျခမျးကို ဖိစုပျလိုကျပွီး ကြှနျတျော ပွနျလညျး မထုတျ၊ ဆကျလဲ မသှငျးပဲ မှေးထားလိုကျပါတယျ။ ပါးစပျက သူ့နှုတျခမျးကိုစုပျ၊ လကျနှဈ ဖကျကတော့ ညီမလေးရဲ့ ဖငျလေးတှကေို ပှတျလိုကျ၊ နို့လေးတှကေို ဆှလိုကျနဲ့ပါ။ ဒီလိုနဲ့ နဲနဲကွာတော့ နောကျတဈကွိမျ ဖိခလြိုကျပါတယျ။ ညီမလေး ထပျ အျောပါတယျ။ အသံတော့ သိပျမကယျြတော့ပါဘူး။ ၃ပုံ ၂ပုံလောကျလဲ ကြှနျတေျာ့ဟာက ဝငျသှားပါပွီ။
နောကျထပျ ထပျနှူးပါတယျ။ ခဏလတေော့ ထပျဖိခလြိုကျပါတယျ။ အဆုံးထိကို ဝငျသှားပါတယျ။ ညီမလေး မကျြနှာက ရှုံ့မဲ့လို့နပေါတယျ။ မကျြလုံးမှာ မကျြရညျစလေးတှတေောငျတှရေ့ပါတယျ။ သူ့ပိပိလေးမှာလညျး သှေးစလေးတှေ ကပျနတောတှပေ့ါသေးတယျ။ နဲနဲလေးကွာအောငျ နှပျထားပွီးတော့မှ ဖွညျးဖွညျးခငျြး အသှငျးအထုတျလေး စလုပျပေးပါတယျ။ ပထမတော့ ညီမလေး ကွိတျခံနတောပါ။ နောကျတော့ သူကပါ ကော့ကော့ ပေးလာပါတယျ။ ၁၀ခကျြလောကျရောကျတော့ “ကိုကွီး.. ညီမလေးရငျထဲမှာတငျမြီုးကွီးပဲ… ဟိုဟာထဲမှာလဲ တဈမြိုးကွီးပဲ….” ကြှနျတျော နားလညျလိုကျပါတယျ။ ညီမ လေး ပွီးတော့မယျဆိုတာ။ အဲဒါနဲ့ ခပျသှကျသှကျလေး ဆောငျ့ပေးလိုကျပါတယျ။ ခဏနတေော့ ညီမလေး ကြှနျတေျာ့ကို အတငျးကုတျပွီး ပွီးသှားပါတယျ။ ကြှနျတျောလညျး ပွီးခါနီးနပွေီမို့လို ခပျသှကျသှကျလေး ဆောငျ့ပွီးတော့ သူ့ပိပိလေးထဲမှာတငျ သုတျရညျတှကေို ထုတျလိုကျပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့သုတျရညျ တှနေဲ့ သူ့ သှေးစလေးတှေ ပေါငျးပွီးတော့ ညီမလေးရဲ့ ပိပိလေးထဲကနပွေီးအပွငျကို လြံကလြာပါတော့တယျ။ ပွီးးး။
သူ့နာမည်က ဝသုန်ပါ။ ဝသုန်ဆိုတာ ကျွန်တော်ရဲ့ ညီမဝမ်းကွဲပါ။ ၂၀မ်းကွဲလို့ပြောရမယ်နဲ့တူတယ်။ ကျွန်တော့်အမေရဲ့ ဝမ်းကွဲအကိုရဲ့သမီးပါ။ အဖြစ်အပျက်ကို လိုရင်ပဲပြောပါတော့မယ်။အဲဒိနေ့က သင်္ကြန် အကျနေ့ပါ။ ဝသုန်တို့ အိမ်က လမ်းထဲမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့အိမ်က လမ်းမပေါ်ပါ။ ဝသုန်ကို သူ့အဖေနဲ့ အမေက အပြင်ပေးမထွက်ပါဘူး။ သူ ရေပက်ချင်ရင် ကျွန်တော်တို့အိမ်ကို လာပြီးရေပက်ရပါတယ်။ သူ့အဖေနဲ့အမေက မနက်ဖက် ကားနဲ့လာပို့ပါတယ်။ နေ့ လည် ပြန်ကြိုတယ်။ ညနေပြန်ပို့တယ် ညဖက် ပြန်ကြိုပါတယ်။ အဲဒိအချိန်တုန်းက ဝသုန်က ၇တန်းဖြေအပြီး ၈တန်းတက်မှာပါ။ ကျွန်တော်က တစ်ဦး တည်းသား၊ ၁၀တန်းဖြေထားပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ သင်္ကြန်ဆို အပြင်ထွက်လည်လေ့မရှိပဲ အိမ်မှာပဲ စာအုပ်တွေ အခွေတွေ ထိုင်ကြည့်ရတာကို သဘောကျသူပါ။
အိမ်ကလူတွေကတော့ ပုံမှန်သင်္ကြန်ဆို တရားစခန်းဝင်တာမို့ အိမ်မှာ ကျွန်တော် တစ်ယောက်တည်းရှိလေ့ရှိပါတယ်။ အမေလုပ်တဲ့သူက တပတ်စာအကုန် ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ခုနက သင်္ကြန်အကျနေ့ ကိစ္စကို ပြန်ဆက်ပါမယ်။ အဲဒိနေ့က ထုံးစံအတိုင်း ဝသုန်အိမ်ကို လာပြီးရေပက်ပါတယ်။ တီရှပ်အဖြူ ကာတွန်း ရုပ်လေးတွေနဲ့၊ ဘောင်းဘီကတော့ အတို ပွပွ အဝါရောင်တောက်တောက်လေးပါ။ အဲဒိနေ့က အကျနေ့မို့လို့ ၈နာရီခွဲလောက်ကတည်းက အိမ်ရှေ့မှာ ဝသုန် တို့ သောင်းကျန်းနေပါပြီ။ ဘေးအိမ်က ကလေးတွေနဲ့ တရုန်းတရုန်းနဲ့ လမ်းပေါ်ဖြတ်သမျှလူတွေကို ရေပက်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ တသက်တာမှတ်တမ်းကို ဖတ်လိုက် မျက်စိညောင်းရင် ကလေးတွေရေပက်တာကို ကြည့်လိုက်နဲ့ပေါ့။ အဲဒိအချိန်တင် ဖုန်းလာပါတယ်။
ဝသုန်ရဲ့ အမေပါ။ အကြောင်းကတော့ သူတို့ဒီနေ့ မိတ်ဆွေတွေလာခေါ်လို့ ဥပုဒ်စောင့်သွားကြမယ်။ နေ့လည် ဝသုန်ကို အိမ်မှာခေါ်ထားဖို့နဲ့ ညနေ သူတို့ ပြန်လာမှ လာကြိုမယ်ဆိုတာပါ။ ဖုန်းဆက်ပြီးပြီးချင်း ဝသုန်ကို သွားပြောပါတယ်။ သူကတော့ပျော်သွားပုံပါပဲ။ကျွန်တော့်ကိုတောင် ရေနဲ့ လှမ်းပက်ပြီး စ လိုက်သေးတယ်။ နောက်တော့ နေ့လည် ၁၁ခွဲကျော်လာတော့ ကလေးအုပ်စုကြီး တစတစနဲ့လာပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဝသုန်နဲ့ ဘေးအိမ်က ကလေးလေး ၂ယောက်ပဲကျန်ပါတော့တယ်။ ခဏနေရင် ဝသုန်ကို လှမ်းခေါ်မယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး ကျွန်တော်ဝတ္တုကို ဆက်ဖက်နေလိုက်ပါတယ်။
ခဏနေတော့ အိမ်ရှေ့က စီကနဲ အသံကြားလိုက်ပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ အသံရယ် တခြား ကောင်လေးတွေရဲ့ အသံကို ကြားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ ရေပက်ခံကားတစ်စီးမောင်းထွက်သွားတာပဲမြင်လိုက်ပါတယ်။ ဝသုန်တို့ကိုကြည့်လိုက်တော့ ၃ယောက်စလုံး အိုးမဲတွေနဲ့ ပေတူးနေပါတယ်။ ဝသုန်က ငိုမဲ့မဲ့နဲ့ ကိုကြီးဆိုပြီး အိမ်ထဲပြန်ပြေးလာပါတယ်။ ကလေး၂ယောက်ကတော့ အသံဗြဲနဲ့ အော်ငိုပြီး အိမ်ကို ပြန်ကုန်ကြပါတယ်။ ဝသုန်ကော ကလေး ၂ယောက်စလုံး ပေတူးနေတာပဲ။ ရေပက်ခံကားက သူတို့ကို ဝိုင်းချုပ်ပြီး တော့ မျက်နှာကော ခြေတွေ လက်တွေကိုပါ သုတ်လိုက်ကြတာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဝသုန်ကို ကြည့်ပြီးခွက်ထိုးခွက်လှန်ကို ရီမိတာပါပဲ။
ဝသုန်ကတော့ ဆူဆူအောင့်အောင့်နဲ့ “ကိုကြီ ဘာရီတာလဲ၊ ကိုယ့်ညီမကိုယ် ကာကွယ်မယ်တော့မရှိဘူး” ဆိုပြီးတော့ပေါ့။ “ကောင်းတယ်၊ စောစောမှမတတ်ကြတာကို” ဆိုတော့ ဝသုန်က ကျွန်တော်ကို့ နှာခေါင်းရှုံ့ပြတယ်။ မျက်နှာကလေးစူစူလေးနဲ့ နှာခေါင်းရှုံ့ပြတာမျိုးက အင်မတန်ချစ်ဖို့ကောင်းတာကလားဗျာ။ “ညီမလေးက သူတို့သုတ်တာကို ထွက်မပြေးဘူးလား” ဆိုတော့ “အကိုကြီးရယ်.. သူတို့က ညီမလေးတို့ကို ဝိုင်းအချုပ်ပြီး သုတ်လိုက်တာ” တဲ့။ အဲ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်ကပဲ “ကဲကဲ… နေ့လည်လဲရောက်နေပြီ ရေသွားချိုးတော့… ညနေမှပဲ ပြန်ထွက်တော့” အဲတော့လဲ ဟုတ် ဆိုပြီး ရေချိုးခန်းထဲ တန်းဝင်သွား တော့တာပဲ။ ပြဿနာက အခုမှစတာ။ သူ့အဖေနဲ့ အမေက သူတို့ကိစ္စရှိတာနဲ့ ပစ်သွားကြတာ။
ဟိုကောင်မလေးအတွက် အဝတ်အပိုလေးတောင် ထားခဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ကလည်း အိမ်မှာ တစ်ဦးတည်းသား။ မိန်းခလေးအဝတ်ကရှိတာမဟုတ် ဘူး။ အဲဒါနဲ့ တဘတ်လေး ပုခုံးပေါ်တင်၊ ကျွန်တော့် ဘောလုံးကန်ဘောင်းဘီရယ် တီရှပ်တစ်ထည်ရယ် ယူပြီးတော့ ရေချိုးခန်းဖက်လိုက်လာလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် ဘောလုံးကန်ဘောင်းဘီရယ် တီရှပ်တစ်ထည်ရယ် ယူပြီးတော့ ရေချိုးခန်းဖက်လိုက်လာလိုက်ပါတယ်။ ကောင်မလေးကတော့ တံခါးပိတ်လို့ ရေချိုးနေပါပြီ။ ကျွန်တော်က လှမ်းအော်လိုက်ပါတယ် “ညီမလေး ရေချိုးပြီးရင် ဝတ်ဖို့အဝတ်တွေအပြင်မှာနော်.. ကိုကြီးစောင့်နေပေးမယ် ညီမလေး ရေချိုးပြီးမှ တမင်းတူတူးစားကြတာပေါ့” “ဟုတ်ကိုကြီးရေ ဒီမှာတော့ ညီမလေးကို အိုးမဲသုတ်သွားတာပေပွနေတာပဲ မျက်နှာတင်မကဘူး ကျောတွေပါ သုတ်သွားတာ” “ဟဲ့.. အဲတော့ ကျောမှာပေနေတာ ညီမလေး ဘယ်လိုဖျက်မလဲ အကိုကြီးဖျက်ပေးမယ်… တံခါးဖွင့်..” ကျွန်တော်က ပြောပြီး တံခါးကို ၃ချက်လောက်ပုတ်လိုက်ပါတယ်။
“အာ.. အကိုကြီးကလည်း.. ရတယ် ညီမလေးဖာသာဖျက်မှာပေါ့” “ဘယ်လိုလုပ်ဖျက်လို့ရမှာလဲ.. ကိုကြီးဖျက်ပေးပါ့မယ်ညီမလေးရယ်… မရှက်ပါနဲ့… ဟို တုန်းကလဲ ညီမလေးကို ကိုကြီးရေချိုးပေးဖူးသေးတာပဲကို…” “အာ.. ကိုကြီးရတယ်” “ရမနေနဲ့.. ကိုကြီးဖွင့်ဆိုဖွင့်လေ.. ဘာလျှာရှည်နေတာလဲ..” ကျွန် တော့်လေသံလေး နဲနဲမာလိုက်တော့မှ “ငါကိုက လျှာသွားရှည်တာ… အားအားယားယား” ဆိုတဲ့ ပါးစပ်က ပွစိပွစိသံတိုးတိုးနဲ့ တံခါးချက်ဖြုတ်သံကြားရပါ တယ်။ တံခါးကိုဖွင့်မပေးပါဘူး။ ကျွန်တော်က တံခါးကို ဆွဲဖွင့်ရတာပါ။ တံခါးကို ဆွဲဖွင့်လိုက်တော့မှ လက်တစ်ဖက်ကို ရင်အုံပေါ်ကန့်လန့်တင်ပြီး နောက် လက်တစ်ဖက်နဲ့ ညီမလေးကို ကွယ်ထားတဲ့ ဝသုန်ကို တွေ့ရတာပါ။ဝသုန်ကို မြင်မြင်ချင်း ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲကို ပြာခနဲကို ဖြစ်သွားပါတယ်။
ကျွန်တော်မထင်ဘူး။ ကျွန်တော့်ညီမလေး ဝသုန်ဟာ အဲလောက်လှ အဲလောက်ချစ်ဖို့ကောင်းလိမ့်မယ်လို့ကို မထင်တာပါ။ အသားလေးက ဖြူဝင်းနေပါ တယ်။ ရင်သားလေးတွေကို လက်နဲ့ကွယ်ထားပေမဲ့ စူစူလေးထွက်နေတာကို သတိထားလိုက်မိပါတယ်။ တင်ပါးလုံးလုံးလေးတွေက ရေစိုထားလို့ ပြောင်လက်နေပါတယ်။ အိုးမဲတွေကလည်း ကိုယ်အနှံပါ။ ဟိုသူတောင်းစားတွေ ဘယ်လိုများသုတ်လိုက်လဲမသိဘူး။ မျက်နှာတင်မကဘူး။ ခြေတွေ လက် တွေအပြင် ပေါင်နဲ့ တင်ပါးပေါ်မှာမဲတူးနေပါတယ်။ သူကတော့ မျက်နှာစူပုတ်ပုတ်နဲ့ ပွစိပွစိပြောနေတုန်းပါပဲ။ “ကိုကြီး.. ဘာကြည့်နေတာလဲ.. ရှက်ပါတယ် ဆိုမှ” သူက အော်မှ လန့်ပြီးသတိဝင်လာပါတယ်။ “အေးပါဟ… ညီမလေးကလည်း တကတည်း ကိုယ့်ညီမကိုယ်လှမှန်း အခုမှသိသွားလို့ပါ” “ကိုကြီးနော်… ဒေါ်လေးတို့နဲ့ တိုင်လိုက်မှာ…” “အဲ.. တိုင်တော့မတိုင်ပါနဲ့ကွယ်…. ဒါနဲ့ ညီမလေးက မျက်နှာတင်မကပဲ တင်ပါးတွေမှာပါ အိုးမဲတွေပေနေရတာလဲ” “ဟုတ် တယ်… ဟိုအကောင်တွေ ညီမလေးကို အတင်းချုပ်ပြီးသုတ်သွားတာ… ဘောင်းဘီထဲကိုပါ လက်နှိုက်သွားတာ.” “ကဲကဲထားပါတော့ ကိုကြီး ဆေးပေးပါ့ မယ်” ခွေးသူတောင်းစားတွေက အိုးမဲဆိုပြီး အမဲဆီတွေသုတ်သွားတာ။
ဘယ်ဖျက်လို့လွယ်ပါ့မလဲ။ ကျွန်တော် အရင်ဆုံးသူ့လက်က အိုးမဲတွေကို စဖျက်ပေးပါတယ်။ သူ့လက်တစ်ဖက်ကို ပေးလိုက်ရလို့ ရင်သားလေးတွေအကာ အကွယ်မဲ့ပြီး ဟင်းလင်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်။ ရင်သားလေးတွေက အခုမှ စူစူလေးတွေ ဖြစ်စလေးတွေပါ။ နို့သီးခေါင်းလေးတွေတောင်မပေါ်သေးပါဘူး။ လက်မှာပေနေတဲ့အမဲဆီတွေကို တော်တော်လေး ဆေးပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဆပ်ပြာအထပ်ထပ်တိုက်ပြီးမှပြောင်တာပါ။ “ဟိုဖက်လှည့်…” သူ့ကို ကျောပေးခိုင်းပြီးတော့ ကျောမှာ အစင်းလိုက်ကြီး ဖျက်ရပါသေးတယ်။ ပြီးတော့မှ တင်ပါးမှာ လက်ရာကြီး။ ကြည့်ရတာ ဘောင်းဘီအောက်ခြေကနေပြီ အောက်ခံဘောင်းဘီထဲအထိနှိုက်ပြီး ဖင်ကို ကိုင်သွားတာပါ။
” ခွေးမသား မောင်မင်းကြီးသားများ ငါ့ညီမ ဖင်နုနုလေးကို ကိုင်သွားကြတယ်။ ကားအစီးလိုက် မြောင်းထဲထိုးကျပါစေဗျာ” ကျွန်တော် စိတ်ထဲကနေပြီး ရေရွတ်လိုက်တာပါ။ အဲဒါကို ဝသုန်က “ကိုကြီး.. ညီမလေးဖင်ကြည့်ပြီး ဘာတွေ ပွစိပွစိနဲ့ ရွတ်နေတာလဲ…” “အာ… မဟုတ်ရပါဘူးညီမလေးရယ်…” ကျွန်တော်သူ့ဖင်လုံးလုံးလေးကို လက်နဲ့ကိုင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာ နူးညံ့တဲ့ အထိအတွေ့လေးနဲ့ အိကနဲပါလာပါတယ်။ ပြီးတော့မှ တင်ပါး လေးကို လက်ကလေးနဲ့ အသာအယာလေး ပွတ်ပေးနေမိပါတယ်။”အကိုကြီး… အကိုကြီး အိုးမဲဖျက်နေတာလား… ညီမလေးဖင်ကို ပွတ်နေတာလား…” “အင်းပါ အင်းပါ” ကျွန်တော် ပြန်ဖြေပြီးတော့ သတိဝင်လာတာနဲ့ အခုမှ အိုးမဲကို စဖျက်ဖြစ်ပါတယ်။
တင်ပါးလေးကို ညှစ်ညှစ်ပြီးကိုင်ပါတယ်။ လက်တစ်ဖက်နဲ့ နယ်ပါတယ်။ ဖင်ကြားလေးထဲကို လက်ကလေးနဲ့ အမြှောင်းလိုက်လေးပွတ်ဆွဲတော့ ညီမလေး ကော့သွားပါတယ်။ “အ.. အ.. ကိုကြီးရေ.. ဘာတွေလုပ်နေတာလဲ..” အမဲဆီတွေ ပြောင်လောက်ပြီမို့ ကျွန်တော် ရေလောင်းချပေးလိုက်ပါတယ်။ ရေစ လေးတွေနဲ့ဝင်းနေတဲ့ ဖင်လုံးလုံးလေးကိုမြင်တော့ ကျွန်တော် စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပါဘူး။ တခါတည်း ကုန်းနမ်းလိုက်မိပါတယ်။ ‘ကိုကြီးရေ.. ညီမလေးဖင် ကို ဘာလို့နမ်းနေတာလဲ…’ ညီမလေးက အော်ပါတယ်။ “အော်… အမဲဆီတွေက အနံ့ပါကျန်တတ်တယ်လေ.. အနံ့ပါ ပြောင်မပြောင် နမ်းကြည့်ရတာပေါ့” ကျွန်တော် နှခေါင်းက မခွာပဲနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်။ နှခေါင်းလေးနဲ့ ဖင်ကြားလေးထဲအထိုတိုးပြီး ရှူလိုက်ပါတယ်။ ဆပ်ပြာနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ပါ။
နှုတ်ခမ်းလေးတွေနဲ့လည်း ပွတ်တိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။ “ကိုကြိးရေ.. တော်ပြီနော်… ညီမလေး မနေတတ်တော့ဘူး…” သူပြောမှပဲ မျက်နှာကို ခွာလိုက်ပါ တယ်။ “ကဲ.. အကုန်ပြောင်ပြီနဲ့တူတာပဲ…. ” ညီမလေးက အခုထိ သူ့ပိပိလေးကို လက်နဲ့ အုပ်ထားတုန်းပါ။ အခုထိ သူ့ ပိပိလေးကို တစွန်းတစ်စတောင်မမြင် ရသေးလို့ အကြံထုတ်လိုက်ပါတယ်။ “ညီမလေး… အောက်ကလက်ကို ဖယ်လိုက်လေ.. ဖုံးမထားနဲ့… အဲမှာ အိုးမဲတွေပေနေသေးလားမသိဘူး” “အာ.. အကိုကြီးကလဲ မပေပါဘူး…. ” “လက်ဖယ်လိုက်ပါညီမလေးရယ်” “ဖယ်ပါဘူး.. ရှက်စရာကြီး” “ဘာလို့ရှက်ရတာလဲ.. မောင်နှမချင်းချင်းပဲဟာ.. ရှက်စရာ မဟုတ်ပါဘူး” “ရှက်စရာမဟုတ်ရင် ကိုကြီးချွတ်နေပါ့လား… သူကျတော့ မချွတ်ပဲနဲ့….” “အော်.. ညီမလေးကို ကိုကြီးမချွတ်ပဲနေလို့လား”
“ဟုတ်တယ်… ညီမလေးကတော့ ဖင်ပြောင်ကြီးနဲ့.. သူကျတော့ အကုန်ဝတ်ထားတယ်… ကိုကြီး အကုန်ချွတ်ရင် ညီမလေး လက်ဖယ်မယ်….” “ကဲကဲ… ငါ့ ညီမလေး စိတ်ချမ်းသာစေဖို့ ကိုကြီး ချွတ်ပေးရမှာပေါ့…” ကျွန်တော် ဝတ်ထားတဲ့ တီရှပ်ကို အရင်ချွတ်လိုက်ပါတယ်။ ဘောလုံးကန်လေ့ရှိတဲ့သူမို့လို့လား တော့မသိဘူး ကျွန်တော့်မှာ သင့်တင့်တဲ့ ကြွက်သားတွေတော့ရှိပါတယ်။ ညီမလေးကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်ကို မမှိတ်မသုံ စိုက်ကြည့်နေပါ တယ်။ ကျွန်တော်လဲ သူ့ရှေ့မှာ ဘောင်းဘီကို ချွတ်ချလိုက်ပါတယ်။ ညီတော်မောင်က ဖြောင်းကနဲကို ကန်တက်လာပါတယ်။
“ကိုကြီးဟာက မာမာကြီးလား… ဘာလို့မာနေတာလဲ” “အင်း.. ညီမလေးကို အခုလိုမြင်ရတော့ အကိုကြီး မနေနိုင်တော့ဘူးလေ… ညီမလေး ကိုင်ချင်ရင် ကိုင်ကြည့်လေ…..” ညီမလေး ကျွန်တော့်ညီလေးကို မရဲတရဲနဲ့လာကိုင်ပါတယ်။ အခုတော့ သူ့ပိပိလေးကနေလက်ကို ခွါလိုက်တဲ့အတွက် သူ့ပိပိလေးကို စမြင်ရပါတယ်။ အမွှေးမပေါက်သေးပါဘူး။ မို့မို့လေး နဲ့ပြောင်ရှင်းနေပါတယ်။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ သူ့ဆီးခုံမှာလည်း အိုးမဲတွေပေနေပါတယ်။ “ကဲ.. ကဲ အဲဒိ အိုးမဲတွေပါ အကိုကြိးဆေးပေးမယ်နော်…” ညီမလေး ဘာမှပြန်မပြောတော့ပဲ ကျွန်တော့်ဖက်ကို အသာတကြည်လေးလှည့်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချလိုက်တော့ သူ့ပိပိလေးနဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာ တတန်းထဲဖြစ်သွားပါတယ်။ လက်ထဲကို ဆပ်ပြာနဲနဲယူပြီး သူ့ပိပိဘေးကို စပွတ်လိုက်ပါ တယ်။
ညီမလေး နဲနဲတွန့်သွားပါတယ်။ ကျွန်တော် သေသေချာချာလေး သူ့ပိပိဘေးနားလေးကို ပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုမှလည်း သူ့ပိပိလေးကို အနီးကပ်မြင်ရ ပါတယ်။ ပိပိလေးက ခုံးထနေပါတယ်။ ကြွက်နားရွက်လေးတွေကအခုမှ ထွက်ပြူစလေးပါ။ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက ရဲတွတ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် လက်ချော်သလိုနဲ့ သူ့ပိပိလေးကို ပွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ညီမလေးဆီက အသံမကြားရတော့ပါဘူး။ သူ့အသက်ရှူသံတွေမြန်နေမှန်းတော့သိပါတယ်။ သူ ရှက်သွားမှာစိုးလို့ မျက်နှာကို မကြည့်တော့ပဲ အသာအယာလေးပွတ်ပေးနေပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ပွတ်တာကို ရပ်ပြီး ရေလေးလောင်းချပေးလိုက်ပါတယ်။ သူ့မျက်လုံးတွေက အားမရသလို ရီဝေဝေကြည့်နေတာကို တွေ့လိုက်ပါတယ်။
“ညီမလေးရယ်.. ရေချိုးတာ အရမ်းကြာနေပြီ.. အအေးမိလိမ့်မယ်..” သူ့ကို ပါလာတဲ့ တဘတ်နဲ့ ရေသုတ်ပေးလိုက်ပြီး အခန်းထဲသွားဖို့ ပြောလိုက်တာပါ။ “အဝတ်ဝတ်မနေနဲ့တော့ အခန်းထဲရောက်ရင် ရေခြောက်အောင် သုတ်ရအုန်းမှာ..ဝသုန်တစ်ယောက် ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ အိပ်ခန်းထဲကို လှစ်ခနဲပြေးသွားပါ တယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့နောက်ကနေပြီးတော့ တဘတ်လေးကိုင်ပြီးပြေးလိုက်လာတာပါ။ “ဟား…ဟာ… ကောင်မလေး ရှက်လဲမရှက်ဘူး…. ဖင် ပြောင်ကြီးနဲ့ သွားနေတယ်…” ကျွန်တော်လှမ်းစလိုက်တော့ ဝသုန်ကလဲ အားကျမခံ… “ကိုကြီးလဲ ဘာထူးလို့လဲ… သူ့ဟာကြီး တရမ်းရမ်းနဲ့ မရှက်ဘဲနဲ့ များ….” အခန်းထဲရောက်တော့ – “ကဲ.. ကိုကြီးရေသုတ်ပေးမယ်… ငါ့ညီမလေးကို” ဝသုန်ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ ညိမ်ညိမ်လေးရပ်နေပေးပါတယ်။
ကျွန်တော်က ရေမသုတ်သေးပဲနဲ့ သူ့ကို ခြေဆုံးခေါင်းဆုံးသေချာကြည့်ပြီးတော့- “အားပါး … ငါ့ညီမလေးက တော်တော်လှ.. တော်တော်ချစ်စရာကောင်းပါ လား… နို့သီးခေါင်းလေးတွေက နီရဲရဲလေးတွေ… ဆီးခုံလေးက ဖောင်းပြီး ဟိုနေရာလေးက………” “ကိုကြီးရေ… တော်တော့.. ညီမလေးရှက်လာပြီ” စကားမဆုံးသေးခင် အတင်းအော်ပြီး တားပါတယ်။ မျက်နဲကလည်း ရဲပတောင်း ခတ်နေပါတယ်။ “ညီမလေး… ဟိုဖက်လှည့်ပေးပါလား.. ကိုကြီးကြည့် ချင်လို့….” “ကိုကြီးနှာဘူး…” ပါးစပ်ကအော်၊ မျက်စောင်းထိုးရင်းနဲ့ ကျောလှည့်ပေးပါတယ်။ တင်ပါးလေးကားကား၊ ဖင်က လုံးလုံးကျစ်ကျစ်လေး၊ ပေါင်တံ သွယ်သွယ် နဲ့အရမ်းလှတဲ့ကျွန်တော့်ညီမလေးလေ။ ကျွန်တော် ညီမလေးကို နောက်ကနေ သိုင်းဖက်လိုက်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ မာမာကြီးက သူ့ဖင်ကြားထဲကို တန်းတန်းကြီးကို ထောက်မိပါတယ်။ “ငါ့ညီမလေး… အိုးမဲတွေ စင်ရဲ့လား.. အမဲဆီနံ့တွေ နံနေသေးလား… မှန်းစမ်း.. အကိုကြီး နမ်းကြည့်မယ်…” သူ့ပါးလေးကို ရွှတ်ခနဲနမ်းလိုက်ပါတယ်။ “အားပါး.. မွှေးလိုက်တာ… ဒီပါးတော့ စင်သွားပြီ.. ကျန်တဲ့နေရာတွေ စစ်ရ အုန်းမယ်” ဝသုန်ရဲ့ ကျောဆီကို နမ်းရင်းနဲ့ အောက်ကို ဆင်းသွားလိုက်ပါတယ်။ တင်ပါးလေးကို နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ခလုတ်တိုက်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ကို ရှေ့ကိုလှည့်လိုက်ပါတယ်။ သူ့ပိပိလေးက ကျွန်တော့် နှာခေါင်းလေးနဲ့ ကွက်တိလေးပါ။ ကျွန်တော်မနေနိုင်တော့ပါဘူး။ နှုတ်ခမ်းနဲ့ နမ်းရင်းနဲ့ လျာနဲ့ သူ့ပိ ပိလေးကို လျှက်လိုက်ပါတယ်။
“အ.. ကိုကြီး… ဘာလို့ လျှာနဲ့ လျက်နေတာလဲ” “အော် အနံ့တင်စင်လို့မရဘူးလေ အိုးမဲ အရသာတွေကျန်မကျန်စစ်တာ” “ကိုကြီးလူလည်ကြီး” “ညီမလေး ကုတင်ပေါ်တက်ကွာ ကိုကြိးအရသာခံလို့မရဘူး…” ကျွန်တော့်ညီမလေး ကုတင်ပေါ်တက်ပြီး ပက်လက်လေးလှန်ပေးပါတယ်။ ကျွန်တော် သူ့ပေါင် ကြားမှာ နေရာယူပြီးတော့မှ သူ့ပိပိလေးကို လက်လေးနဲ့ အသာဟ —– အားပါး.. အထဲမှာ ရဲတွတ်နေပါတယ်။ နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက ပန်းရောင်လေး။ ပိ ပိလေး အပေါ်တဝိုက်မှာ တော့ ပြောင်ရှင်းနေပါတယ်။ ကျွန်တော် လျှာဖျားလေးနဲ့သူ့ပိပိထဲက အဆံလေးကို တို့လိုက်ပါတယ်။ ‘အ… ကိုကြီး.. ဘာလုပ်တာ လဲ….’ အသံထွက်ပြီးတာနဲ့ ညီမလေး ဆီက အသက်ရှူသံပြင်းပြင်းတွေပဲ ကြားနေရပါတယ်။ ကျွန်တော့ကတော့ လျာနဲ့ အပြားလိုက်ဆွဲလိုက်။ အထဲမှာ ထိုး မွှေလိုက်၊ လက်နဲ့ ဖြဲပြီး လျှာနဲ့ ထိုးလိုက်နဲ့ တော်တော်ကို အလုပ်ရှုပ်နေပါတယ်။ သူ့ပိပိလေးကအရေတွေကလည်း ရွှဲစိုနေပါပြီ။
‘ညီမလေး… ကိုကြီး ညီမလေး ဟာထဲကို သွင်းချင်တယ်ကွာ…’ “ကိုကြီး.. မဖြစ်လောက်ဘူးတူတယ်နော်… မောင်နှမချင်းတွေ… ပြီးတော့ ညီမလေးဟာက သေးသေးလေး.. ကိုကြီး ဟာက အကြီးကြီး… ” “အော်.. ညီမလေးရယ်ဖြစ်မှာပါ….” ကျွန်တော် သူ့ဆီက တုန့်ပြန်မှုကို မစောင့်တော့ပဲ သူ့နှုတ်ခမ်းတွေကို တေ့စုပ်လိုက်ပါတယ်။ ညီမလေး မျက်တောင် ကော့စင်းပြီး ညိမ်းကျသွားပါတယ်။ လက်တဖက်က သူ့ပိပိလေးကို ပွတ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်ဟာကို သူ့ပိပိလေး နဲ့ တေ့ပြီး ပွတ်ဆွဲနေလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အလစ်အငိုက်ဖမ်းပြီး ဖိထည့်လိုက်ပါတယ်။ “အာ သေပါပြီ ကိုကြီးရယ်…” “အော်… ဖြည်းဖြည်းပါညီမလေး ရယ်…” သူနှုတ်ခမ်းကို ဖိစုပ်လိုက်ပြီး ကျွန်တော် ပြန်လည်း မထုတ်၊ ဆက်လဲ မသွင်းပဲ မှေးထားလိုက်ပါတယ်။ ပါးစပ်က သူ့နှုတ်ခမ်းကိုစုပ်၊ လက်နှစ် ဖက်ကတော့ ညီမလေးရဲ့ ဖင်လေးတွေကို ပွတ်လိုက်၊ နို့လေးတွေကို ဆွလိုက်နဲ့ပါ။ ဒီလိုနဲ့ နဲနဲကြာတော့ နောက်တစ်ကြိမ် ဖိချလိုက်ပါတယ်။ ညီမလေး ထပ် အော်ပါတယ်။ အသံတော့ သိပ်မကျယ်တော့ပါဘူး။ ၃ပုံ ၂ပုံလောက်လဲ ကျွန်တော့်ဟာက ဝင်သွားပါပြီ။
နောက်ထပ် ထပ်နှူးပါတယ်။ ခဏလေတော့ ထပ်ဖိချလိုက်ပါတယ်။ အဆုံးထိကို ဝင်သွားပါတယ်။ ညီမလေး မျက်နှာက ရှုံ့မဲ့လို့နေပါတယ်။ မျက်လုံးမှာ မျက်ရည်စလေးတွေတောင်တွေ့ရပါတယ်။ သူ့ပိပိလေးမှာလည်း သွေးစလေးတွေ ကပ်နေတာတွေ့ပါသေးတယ်။ နဲနဲလေးကြာအောင် နှပ်ထားပြီးတော့မှ ဖြည်းဖြည်းချင်း အသွင်းအထုတ်လေး စလုပ်ပေးပါတယ်။ ပထမတော့ ညီမလေး ကြိတ်ခံနေတာပါ။ နောက်တော့ သူကပါ ကော့ကော့ ပေးလာပါတယ်။ ၁၀ချက်လောက်ရောက်တော့ “ကိုကြီး.. ညီမလေးရင်ထဲမှာတင်မျီုးကြီးပဲ… ဟိုဟာထဲမှာလဲ တစ်မျိုးကြီးပဲ….” ကျွန်တော် နားလည်လိုက်ပါတယ်။ ညီမ လေး ပြီးတော့မယ်ဆိုတာ။ အဲဒါနဲ့ ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ခဏနေတော့ ညီမလေး ကျွန်တော့်ကို အတင်းကုတ်ပြီး ပြီးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ပြီးခါနီးနေပြီမို့လို ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်ပြီးတော့ သူ့ပိပိလေးထဲမှာတင် သုတ်ရည်တွေကို ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်သုတ်ရည် တွေနဲ့ သူ့ သွေးစလေးတွေ ပေါင်းပြီးတော့ ညီမလေးရဲ့ ပိပိလေးထဲကနေပြီးအပြင်ကို လျံကျလာပါတော့တယ်။ ပြီးးး။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ၀သုနျ